मूख्य सचिवजस्तो मान्छेले लोकतन्त्रको मर्म किन बुझेनन् | Simpani
कान्तिपुरमा प्रमुख सचिवको प्रवचन सुनेपछि केहि नलेखि बस्न सकिएन । उहाँको आलेखको आशयलाई सम्मान गर्दागर्दै पनि मूख्य सचिवजस्तो मान्छेले लोकतन्त्रको मर्म नबुझेकोमा चिन्ता लाग्यो । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्दान्त हो, “सबै मान्छे स्वार्थले प्रेरित हुन्छन् ।” नकारात्मक स्वार्थलाई रोक्ने क्षमताले मात्रै लोकतन्त्र सफल हुन्छ । लीलामणिज्यूको तर्क उल्टो छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, पहिला स्वार्थ त्याग्नु पर्छ । निस्वार्थ म ले निस्वार्थ “म” लाई साथ दिए मात्र देश विकास हुन्छ । लोकतन्त्रको बारे धेरै दार्शनिक चिन्तन् भैसकेको छ, र यसमा स्कटेली दार्शनिकहरुको मान्यता छ, सबै मान्छेको आआफ्नै स्वार्थ हुन्छ । एउटा मान्छेको स्वार्थ र अर्कोमान्छेको स्वार्थका बिच टकराव हुन्छ । र अन्तमा सबैको भलो हुने खालका स्वार्थहरु विस्तारै स्थापित हुँदै जान्छन् । अर्थशास्त्रले विकसित गरेको गेम थियोरीको मान्यता पनि त्यहि छ । अन्तत सबैलाई फाईदा हुने नियमहरु बन्छन् तर यसका लागि समाजलाई बेफाइदा हुने प्रवृत्ति तथा स्वार्थहरु दूरुत्साहित हुँदै जानु पर्छ । तर यसका लागि उद्भव प्रक्रियालाई ठाउँ र समय दिनु जरुरी छ ।
सबै स्वार्थ नकारात्मक हुँदैनन् । कुनै स्वार्थले समाजलाई फाईदा गर्छ, कुनै स्वार्थले समाजलाई हानि गर्छ । विल गेट्स बन्न खोज्ने स्वार्थलाई किन रोक्ने ? लिलामणिजीको पनि स्वार्थ छ । मलाई सबैले साथ देउन् र देशमा राम्रो काम गर्न सघाउन् । असल काम गर्ने चाहना राम्रो हो । असल काम गरेर देशको हिरो बन्ने चाहना पनि ठिकै हो । तर यसको लागि आफ्नो अहं त्यागेर अरुको साथलिन सक्ने क्षमता छ कि छैन ? यदि यस्तो क्षमता नभएको अवस्थामा नकारात्मक काम गर्न खोज्ने र काममा बाधा अड्चन मात्र सिर्जना गर्ने मानिशलाई उदांगो पारेर दण्डित गर्न सक्ने व्यवस्था खै ? त्यसकारण पहिलो आवश्यकता प्रणालीको सिर्जना हो । यस्तो प्रणाली जसले नकारात्मक स्वार्थलाई दण्डित गर्छ र समाजलाई फाईदा हुने स्वार्थलाई प्रेरित गर्छ ।
उहाँको अर्को तर्क छ, हामी नेताहरुलाई गाली गर्छौं । यस्तो गर्नु हाम्रो नकारात्मक विचारको उत्कर्ष हो । हामी काम गर्न छोडेर गाली मात्र गर्छौं, अथवा कसैलाई देवत्वकरण गरेर हाम्रो भविष्य उसको हातमा सुम्पिन्छौं । यो सामन्ती समाजको चरित्र हो र यसबाट रुपान्तरण सम्भव छैन । यथार्थ अलि भिन्न छ । नेताहरुलाई गाली गर्नु हाम्रो नियति हो । यसका दुई प्रमुख कारण छन् । पहिलो, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक व्यवस्था कमजोर र निकम्मा भएका कारण जनतासंग बोल्ने, भोट दिने र आन्दोलन गर्ने बाहेक अरु उपाय छैन । दोश्रो, जनतासंग प्रभावकारी राजनीतिक अधिकार नभए पनि अभिव्यक्तिको अधिकार त छ । त्यसको प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक परिपाटी हो न कि सामन्ती चरित्र ।